Akwampaefo ne Australia Nkuraase a Ɛwɔ Akyirikyiri
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mingrelian Mongolian Moore Motu Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Akwampaefo baanu, George Rollston ne Arthur Willis, de nsu regu wɔn kar mu.—Northern Territory, afe 1933
MARCH 26, 1937 no, mmarima baanu bi a wɔatwa kwan abrɛ de nkakrankakra de wɔn kar a ɛho abɔ mfutuma kopuee Sydney, Australia. Wofii Sydney kurow no mu no, na adi afe baako. Wɔn akwantu no ma wotwaa kwan bɛboro akwansin 12,000 (kilomita 19,300) faa Australia amantam a ɛwɔ akyirikyiri paa na ɛhɔ yɛ mmonkyimmɔnka no mu. Ɛnyɛ sɛ saa mmarima no kokyinkyin hwehwɛɛ nneɛma a ɛwɔ asase no so. Mmom no, na wɔka akwampaefo bebree a wɔyɛ nsi a na wɔasi wɔn bo sɛ wobekyinkyin aka Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpa no akyerɛ nkurɔfo a wɔte nkuraase a ɛwɔ akyirikyiri wɔ Australia no ho. Wɔfrɛ saa mmarima baanu no Arthur Willis ne Bill Newlands.
Ɛde besi afe 1920 mfe no awiei mu hɔ no, na nkurow akɛse ne nketewa a ɛdeda mpoano no mu paa na Bible Asuafo * kakraa bi a wɔwɔ Australia no ka asɛmpa no. Nanso, na asase kesee a ne kɛse bɛboro Ghana mpɛn 20 da ɔman no mfinimfini fam a nnipa a wɔwɔ hɔ nnɔɔso. Ná anuanom nim paa sɛ, ɛsɛ sɛ Yesu akyidifo di ne ho adanse ‘de kɔ asase ano nohoa,’ na na Australia nkuraase a ɛwɔ akyirikyiri no nso ka ho. (Aso. 1:8) Nanso, na anuanom bɛyɛ dɛn ayɛ adwuma kɛse a ɛte saa? Esiane sɛ na wɔwɔ gyidi paa sɛ Yehowa behyira wɔn mmɔdenbɔ so nti, wosii wɔn bo sɛ wɔbɛyɛ nea wobetumi biara.
AKWAMPAEFO PAEE KWAN NO
Afe 1929 no, asafo ahorow bi a ɛwɔ Queensland ne Western Australia yɛɛ kar dodow bi. Wɔhyɛɛ da siesiee kar no ɔkwan bi so a ɛbɛma wɔatumi de akɔka asɛm no wɔ amantam a ɛwɔ ɔman no mfinimfini fam. Akwampaefo a wɔwɔ ahoɔden a na wobetumi agyina tebea a emu yɛ den ano, na sɛ kar no sɛe nso a wobetumi asiesie no, wɔn na wɔde kar no hyɛɛ wɔn nsa. Saa akwampaefo no kɔɔ mmeae pii a na obiara nkɔkaa asɛmpa no wɔ hɔ da.
Akwampaefo a na wontumi ntɔ kar de, sakre na wɔtenaa so kɔkaa asɛm no wɔ nkuraa a ɛwɔ akyirikyiri no. Sɛ nhwɛso no, afe 1932 no, Bennett Brickell a na wadi mfe 23 no fii Rockhampton a ɛwɔ Queensland mantam no mu, na ɔde abosome nnum kɔkaa asɛmpa no wɔ nkuraa a atew ne ho wɔ saa mantam no atifi fam. Ɔde nneɛma pii guu ne sakre a na ɔde retu kwan no so. Nneɛma no bi ne kuntu, ntade, aduan, ne nhoma pii. Bere a ne sakre no tae hii wɔ kwan so mpo no, omiaa n’ani toaa n’akwantu no so efisɛ na ɔwɔ awerɛhyem sɛ Yehowa bɛboa no. Enti opiaa ne sakre no twaa akwansin 200 (kilomita 320) a aka no kɔfaa mmeae bi a na osukɔm akunkum mmarima binom. Mfe 30 a edi hɔ no, Onua Brickell de sakre, moto, ne kar twaa akwansin mpempem pii wɔ Australia. Ɔno na odii kan kaa asɛmpa no kyerɛɛ Aboriginefo, na ɔboa ma wɔhyehyɛɛ asafo ahorow nso. Ɛmaa nnipa a wɔwɔ nkuraase a ɛwɔ akyirikyiri wɔ Australia no huu no yiye, na na wobu no paa nso.
WODII NSƐNNENNEN SO
Aman a ɛwɔ wiase a ɛwɔ nsase akɛse nanso emu nnipa nnɔɔso no, Australia ka ho. Australia wɔ nkuraase pii a nnipa a wɔwɔ hɔ nnɔɔso. Nanso, Yehowa nkurɔfo ayere wɔn ho sɛ wɔbɛhwehwɛ nkurɔfo a wɔwɔ Australia nkuraase a ɛwɔ akyirikyiri no.
Stuart Keltie ne William Torrington yɛ akwampaefo, na wɔka wɔn a wɔyeree wɔn ho saa no ho. Afe 1933 no, wotwaa Simpson Anhweatam kɛse no na wɔkɔkaa asɛmpa no wɔ kurow a wɔfrɛ no Alice Springs mu wɔ Australia mfinimfini pɛɛ. Eduu baabi no, wɔn kar ketewaa a wɔde nam no sɛee, enti wogyaw sii hɔ. Ɛwom sɛ na wɔde dua ahyɛ Onua Keltie nan baako de, nanso ɔtenaa yoma so ma wɔtoaa wɔn akwantu no so kɔkaa asɛmpa no! Akwampaefo no mmɔdenbɔ so baa mfaso bere a wohyiaa ahɔhodan (hotel) bi wura wɔ keteke gyinabea bi a ɛwɔ akyirikyiri a wɔfrɛ hɔ William Creek. Akyiri yi, Charles Bernhardt a na ahɔhodan no yɛ ne dea no begyee nokware no. Ɔtɔn n’ahɔhodan no, na ɔno nkutoo yɛɛ akwampae adwuma no mfe 15 wɔ Australia man no afã bi a ɛhɔnom asase no yɛ wosee, na ɛwɔ akyirikyiri paa no.
Arthur Willis reboaboa ne ho akɔka asɛmpa no wɔ Australia nkuraase a ɛwɔ akyirikyiri no mu.—Perth, Western Australia, afe 1936
Ná ehia sɛ wɔn a wodii kan yɛɛ akwampae adwuma no nya akokoduru na womia wɔn ani na ama wɔatumi agyina nsɛnnennen pii a wohyiae no ano. Bere bi a na Arthur Willis ne Bill Newlands a yɛkaa wɔn ho asɛm mfiase no rekɔka asɛmpa no wɔ Australia nkuraase a ɛwɔ akyirikyiri no, wɔde nnawɔtwe mmienu na etwaa akwansin 20 (kilomita 32) pɛ. Nea ɛma ɛbaa saa ne sɛ, osu tɔe paa ma anhweatam no danee atɛkyɛ. Ɛtɔ da a, wobɛhwɛ no, na wɔrepia wɔn kar no fa anhweatam so a awia rehyew wɔn na mfifiri retew wɔn. Wɔde wɔn kar no faa nsubon a abo pii wom ne nsubɔnka a anhwea ahyɛ no mã mu. Ná wɔn kar no taa sɛe. Ɛba saa a, na wɔnantew anaa wɔka sakre nna pii kɔ kurow a ɛbɛn hɔ mu kɔtwɛn nnawɔtwe pii kosi sɛ wobenya kar no ho nneɛma a asɛe no bi. Nsɛnnennen yi nyinaa akyi no, wɔn abam ammu. Akyiri yi, Onua Arthur Willis faa The Golden Age nsɛmma nhoma no mu asɛm bi kae sɛ: “Ɔkwan biara nni hɔ a ɛyɛ mmonkyimmɔnka anaa ɛware dodoodo ma N’adansefo.”
Charles Harris a ɔde mfe pii ayɛ akwampae adwuma no kae sɛ, ankonamyɛ ne nsɛnnennen a ohyiae wɔ Australia nkuraase a ɛwɔ akyirikyiri no ma ɔbɛn Yehowa paa mmom. Ɔde kaa ho sɛ: “Sɛ wo ho nneɛma nnɔɔso pii a, ɛma w’ani gye paa wɔ asetena mu. Sɛ Yesu mpo nyaa ɔpɛ sɛ ɔbɛda abɔnten bere a ɛho behiae sɛ ɔyɛ saa a, ɛnde ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛma yɛn ani gye sɛ yɛbɛyɛ saa ara bere a adwuma a yɛreyɛ hwehwɛ sɛ yɛyɛ saa no.” Na saa pɛpɛɛpɛ na akwampaefo bebree yɛe. Esiane sɛ na wɔyɛ nsi nti, nnipa a wɔwɔ Australia baabiara tee asɛmpa no, na nnipa bebree baa Onyankopɔn Ahenni no afã.
^ nky. 4 Afe 1931 na Bible Asuafo no faa edin Yehowa Adansefo.—Yes. 43:10.
“Meretwa Aba De Ayi Yehowa Ayɛ”